Wararkii ugu dambeeyay ee Magaalada Kismaayo iyo Ciidamada Barre Hiiraale oo xaafado dhowr ah la wareegay. | Salaan Media
Home Wararka Wararkii ugu dambeeyay ee Magaalada Kismaayo iyo Ciidamada Barre Hiiraale oo xaafado...
Wararkii ugu dambeeyay ee Magaalada Kismaayo iyo Ciidamada Barre Hiiraale oo xaafado dhowr ah la wareegay.
Xaaladda magaalada Kismaayo ayaa saaka aad u kacsan kaddib markii ay shacabka ku dhaqan magaalada ku soo tooseen daryanka madaafiicda iyo rasaasta ay isweydaarsanayaan ciidamada Axmed Madoobe iyo ciidamo kale oo ka amar qaata Barre Hiiraale.
Wararka ayaa sheegaya in saaka ay xidhan yihiin dhammaan waddooyinka ka baxa magaalada iyo kuwa soo gala, kaddib markii ciidamo iska horjeeda goobahaasi ay ku dagaalamayaan, waxaana dabaqyada iyo xaafadaha magaalada Kismaayo qaarkood uu si xowli leh uga socdaa dagaalka.
Sida uu sheegayo goob jooge ku sugan magaalada Kismaayo dadka rayidka ah ayaa si teel teel ah uga barakacaya guryahooda iyagoona beegsanaya goobaha ammaanka ah, hase yeeshee isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo waxaa ku sii qulqulaya dhaawacyada dad ay haleeshay rasaasta wiiftada ah.
Dhinaca kale magaalada Kismaayo ee gobolka H/hoose ayaa shalay gelinkii dambe waxaa ka dhacay dagaallo u dhaxeeya ciidamada saaka ku dagaalamaya gudaha magaalada, kaasi oo xalay fiidkii iskiis u qaboobay, iyadoo dagaalada ay saakay hadana dib uga bilowdeen xaafadda lagu magacaabo Boqolka Guri iyo haantii Dowladda ay biyaha ka siin jirtay dhacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo.